Top 20 4k Wallpapers u Kombiyuutaro, Telefonada casriga ah, iyo iPads
Hoos waxaad ka baran doontaa wixii hab 4k, sababta ay muhiim, iyo sida aad u heli karaan wallpapers 4k dambeeyay oo weyn ku yeelan karaan.
Waa maxay wallpaper 4k?
Top Toban 4k Computer Wallpapers
Top Five 4k iPhone Wallpapers
Top Five 4k iPad Wallpapers
Sidee ayaan u isticmaalaa kuwaas wallpapers 4k?
Xalka 4k waa ka duwan technology kasta oo aad horay u aragnay. Qaar ka mid ah ayaa waxa lagala mid dhigay "HD aalladda" kolba in ay si dhab ah waxa uu yahay. Waa bandhigay xal sare aalladda. Bandhigay waxaa ku koobnayn xal siman oo waxaa inta badan loo isticmaalaa in laga jaro laayeen 4k qaab telefishanka iyo shineemada kale. Magaca 4k ka yimaadaa xaqiiqada ah in qalabka uu leeyahay 4,000 pixels
Sidaas darteed, wallpaper ah 4k waa wallpaper ah telefoonka aad, kiniin, ama computer. 4k waxaa taasoo waddada u xaareysa mustaqbalka ee technology iyo ka hor inta aadan ogaan, qof walba yeelan doonaan wallpapers kuwan. Marka aad soo bixi oo isticmaal wallpaper ah 4k, waxaad la kulmi doonaan Manfaco badan. Faa'iidada koowaad waa xal tayo sare leh oo ku saabsan qalab ama computer-ka sokow image u qurux badan ee asalka ah. Faa'iido kale oo ay tahay in qalab aad noqon doonaa isla ugu qiimaha badan adduunka. Waxaa laga yaabaa in aanay wax badan by monetarily, laakiin bandhigay ee wallpaper ah 4k dhigaysa baadi iyada oo aad telefoon ama furitaanka aad laptop waayo-aragnimo ah ee Meyeydaan.
Haddii aad tixgelinayso inaad la isticmaalayo wallpaper ah 4k on qalab aad, halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fursadaha ugu fiican. Lahaanshaha xal 4k la image kasta waa cajiib, laakiin kaliya image saxda ah qaadataa aad waayo-aragnimo technology ay sarrayntiisu cusub. Iyada oo dhan ka mid ah fursadaha, waa hubaal in aad heli doonto sawirka kaamil ah 4k in ay leeyihiin sida wallpaper ah telefoonka aad, kiniin ah, ama computer. Image kasta waa u gaar ah oo ay jid-qaado mid ka mid ah ku habboon shakhsiyadaada! Eeg Siiyay Goolhaye Iker Casillas doorashada naga halkan:
Dibadda u taagan ka mid ah dadkii badnaa keliya baa la samayn karaa xalka 4k. In masawirkan, ubaxyadii casaan ka hor waxaa la barbar dhigay ubax guduudan ee asalka ah si ay u abuuraan cajiib ah, saamayn midabo.
Haddii aad biyo ku jeclahay, image waxa loogu talagalay adiga. A samada orange qurux badan ka muuqataa biyaha dajisa, oo leh geedo iyo doonyo gabiyada biyaha. Macaamiloon ee image waxaa loo lended karaan in ay 4k xal.
Maxaa ka fiican inay image off bilaabi aad maalin ka badan ayaa wejiga suuq ah oo qaali ah! Asalka madow sanamkii waxay abuurtaa saamayn weyn leh dhogorta shukulaatada saaxiib ka feeri ee. Qaraarka 4k waxay muhiim u tahay nuxurka image this.
Oo doog ah ayaa cad ah oo tuulada buurtan sawir waxa la barbar dhigay madowga dahsoon ee buuraha ee asalka ah. 4k xalka keliya ayaa abuuri kara arrinkan.
Nature ma aha had iyo habka ay u tagaan marka ay timaado soo jeeda. Halkan waxa aad ka arki kartaa dhalaalaya, Chevrolet ah Retro la soo jeeda alwaax Patriots. Halkan Qaraarka sare waa muhiim si ay u muujiyaan faahfaahinta aad gaariga this xusuus.
Xeebta waa meel aad u qurux badan oo qaba oo xididdada dunida hore gundhig in ay sands. Beauty of Qorraxda iyo xeebta si isku mid ah halkan ku cad la xallinta 4k ee cod aqlabiyad ah ku, samada iyo guduud, iyo qorraxda oo dhalaalaysa.
Haa, sawir cat kale. Image Tani waxay qabsatay nooca Patriots oo ka mid ah kitties yar la jeclaysto la xidhmooyin xaabada ee asalka ah. Qaraarka 4k in image tani waa cajiib, iyo camera xitaa diiradda saarayaa xiddiga reer show ah, mugdiga galinaya ka soo jeeda si ay u abuuraan saamayn weyn.
8. Taallada Liberty
The Taallada Liberty waa durkin qaran oo muhiim ah. Xitaa haddii aadan ahayn muwaadin Maraykan ah, haddii aad aaminsan tahay in xorriyad, ka dibna wallpaper taasi kugu habboon. Image halkan sahlay kaliya oo samo iyo Lady Liberty muuqan-laakiin waxay noqonaysaa nuxurka xal 4k.
Riyo kasta oo badda? Image Tani waxay qabsatay nuxurka dusha hirarka-qorax la geedaha xeebta. In kastoo biyo ka degan tahay, kulaylka dabiiciga ah ee image tani waxaa la dhaba bandhigay ay 4k xal sare.
10. is biirsaday: Mid ka mid ah ee Road ah
Haddii aad Tuttosport Martini ee kaamil ah (liin dusheeda!) Oo jecel in ay ku sugan nalalka, markaas wallpaper taasi kugu habboon. Wallpaper Tani waxay isku xira qof walba si orod soonka dunida aan ku nool nahay maanta. Qaraarka Dhismaha sare ayaa dhameystirta nalalka cagaaran dhalaalaya Martini iyo tartanka ee asalka ah.
Iska yaree by Papers.co
Sawir Tani gaar ah siinaysaa ay siladda aragti cusub oo ku saabsan airline celceliska, mahad ay xal cajiib ah.
2. ma29-greenwater-buur-dabiiciga ah
Beauty of this image cajiib ah, asked kulaylaha ah, markabka dalxiiska dhinaca, waxaa kaliya oo xoojiyay ay 4k xal.
3. mj83-caleen-bokeh-cagaaran-dabiiciga ah
Halkii aragtida muuqaal caadi ah, taasi xal sare, image tayo sare leh na yaridda baaxadda xiiso leh oo ka mid ah faahfaahinta Islamka iyo caleen celceliska.
Ever dareemayaa kaliya horjoogsado? Wallpaper Tani 4k bixisaa oo kaliya in koob saamayn-Aviator sawir soo jeeda maqaar qabow.
5. mo18-madow meel-dunida-dhulka-star
Tani wallpaper xal 4k bixisaa aragtida cajiib ah dunida, dayaxa, iyo xiddiga dhalaalaysa.
1. joomatari Qaabka Blue
Haddii aad ku raaxaysan waxyaalaha fudud ee nolosha, taas oo midabo iPad wallpaper 4k waa ku weyn yahay, waayo, aad.
2. Marxaladaha Lake
Tani image xal aalladda qabsatay adayga samada, qorrax, dhirta, iyo biyo ay xal 4k.
3. tumata dhac ah
Ever dareemayaa tumata dunida? Tani bandhigay wallpaper 4k maalin kasta ku siin doonaa waxyoon.
4. A Kartuunka Adduunka
Ma waxaad tahay nerd adduunka cartoon ah? Tani waxay isu diyaariyeen sahlay ah muuqaalada cartoon Retro waxa lagu gaadhaa iyada bandhigay tayo sare leh ee 4k.
5. Starry Night ee Buuraha
Qaraarka 4k in wallpaper this dhammaataan isku xira jawiga iyo Galaxy waxyaabaha dabiiciga ah ee naga dhulka.
Waa wax iska fudud. Sababtoo ah wallpapers ka mid ah ayaa laga soo qaaday websites free bixiya adeegyo bilaash ah, waxaad samayn lahaydeen oo dhan waa u dejisan iyo de ka dhig kuwo aad wallpaper. Halkan sida loo sameeyo:
1. Dooro oo image aad rabto in aad sida aad wallpaper.
2. midig u guji image oo guji "image badbaadin sida ...".
3. Continue (guji "Save").
4. midig u guji aad wallpaper desktop hadda dooro "beddel soo jeeda desktop ...".
5. Next, si fudud u helaan folder meesha aad ku badbaadi aad wallpaper 4k oo ay doortaan.
2. Helitaanka in image ka qalab mobile iyo tuubada iyo hay, saxaafadda "badbaadiyo image."
3. Aad Settings, dooro Wallpapers.
4. Dooro image aad ku badbaadi oo guji "Calan Labada."
Hadda raaxaysatid "HD aalladda" wallpapers 4k xallinta!
> Resource > Video > 20 4k wallpapers u computer, telefoonada smart iyo ipad